Sheekada filimka Jai Simha: Balakrishna wuxuu la yimid filim mada daalo dhameestiran leh | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Jai Simha: Balakrishna wuxuu la yimid filim mada daalo dhameestiran leh
Telugu Superstar Nandamuri Balakrishn wuxuu la yimid filim mada daalo dhameestiran leh oo Jimcadii (12 Jan) tiyaatarada la saaray.
Jilaayaasha: Balakrishna, Nayanthara, Brahmanandam, Natasha Doshi, Haripriya, Prakash Raj and Jayaprakash Reddy
Qiimeynta sheekada filimka: 3/5
Fariinta Filimka Jai Simha Oo Kooban: Narasimha (Balakrishna) isaga iyo wiilkiisa yar waxay usoo guurayaan magaalada Kumbhakonam si ay nolol cusub halkaas kaga bilaawdaan.
Si shaqsi ah Narasimha (Balakrishna) wuxuu ku helaa shaqo darawalnimo ah, laakiin halis ayuu dhexda ka galaa marka uu bad baadiyo qoyska milkiilaha baabuurka uu wado iska leh.
Sidoo kale Narasimha (Balakrishna) waxay isku dhacayaan askari naxariis laawe ah oo ka taliyo magaalada cusub ee uu nolosha ka bilaabay.
Hadaba Narasimha (Balakrishna) waa kuma?
Muxuu Narasimha (Balakrishna) qoyskiisa kaga soo fogaaday kuna qasbay asiga iyo wiilkiisa inay nolol cusub ka bilaabo magaalo uusan ehel ku laheyn?
Narasimha (Balakrishna) sidii uu kaga bad baadaa tuugada uu ka bad baadiyay qoyska milkiilaha baabuurka uu wado iyo askariga isaga daba taagan?
Bandhiga Jilaayaasha: Balakrishna wuxuu la yimid bandhig tamar, carro, dareen qiiro badan iyo xarakaad ka muuqato in badana taageerayaasha la dhici doonaan.
Nayanthara waxay ku leedahay door muhiim ah filimkaan si wacana wey ula jaad qaaday Balakrishna oo ay adag tahay inay atirishooyinka garab istaagaan Superstar-kaan.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Jai Simha:
Action heer sare ah
Muusiga filimkan oo wanaagsan
Qaabka loo faaf reebay oo wacan waxaana laga jaray muuqaal walbo oo ku caajis galin lahaa ama dayacaad ka muuqan lahayd.
Bandhiga Balakrishna oo aadan ka xiiso dhigeyn
Qaabka sheekada la isugu daba riday iyo dhacdooyinka qaar oo si caqli badan loo sameeyay.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Jai Simha:
Shactiro kusoo jiidaneyso malahan filimkaan xitaa leef leefoow (Brahmanandam) markaan shactiradiisa kuguma soconeyso!
Waa filim waqti ahaan aad u dheer 2-saas iyo 45-daqiiqo uu soconaayo waxaa wanaagsaneyd in 2-saac iyo 20-daqiiqo laga dhigo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Jai Simha: Director KS Ravikumar waa waaya arag waayo sheeko hore loo arki jira ayuu muunad u yeelay asigoo si wacan fariintiisa isugu xiray wuxuuna ku xeen daabay sheekadiisa Balakrishna oo si heer sare ah filimkaan u jilay.
Sheekada filimka Jai Simha waxaa la siiyay 3/5 wuxuuna ku muteestay qaabka uu Director Balakrishna isugu daba riday fariintiisa horey loo arki jiray laakiin si xeeladeesan oo kusoo jiidaneyso loo dhigay.
Gunaanad: Jai Simha waa filim mada daalo dhameestiran leh siweyna Balakrishna taageerayaasha kaga heli doonaan, mashruucaan oo miisaaniyad xadidan lagu sameeyay, xiliga feestada Telugu ka jiri doonto maal mahan waxay arimahaas oo dhan ka caawin doonaan inuu filimkaan guul wacan ka gaaro gobolka Telugu.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Jai Simha: